Claudio Ptolemy: Onye ka ọ bụ, biography na feats | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu n'ime ndị nyere ọtụtụ ozi na sayensị. Ọ bụ ihe Claudius Ptolemy. Ọ bụ nwoke bụ onye Gris na-enyocha mbara igwe, mgbakọ na mwepụ na mbara ala na, ọ bụ ezie na ozi pere mpe gbasara ndụ ya, onye sayensị a adịgide ruo taa. A maghị kpọmkwem ebe a mụrụ ya, ma ọ bụ ụbọchị ọ ga-abụ. Amaghikwa ebe o nwuru ma anyi ma oke onyinye ya.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị akụkọ ndụ na uru niile Claudio Ptolemy.
1 Biography nke Claudius Ptolemy
2 Njirimara nke ọrụ Claudius Ptolemy
3 Usoro Claudius Ptolemy
4 Ọrụ ndị ọzọ
Biography nke Claudius Ptolemy
Ọ bụ ezie na amataghị kpọmkwem ebe a mụrụ Claudius Ptolemy, a na-eme atụmatụ na ọ bụ n'Ijipt. Emebere ọrụ ya niile n'etiti ubochi ihe mbu gi huru na AD 127 Emere nchọpụta a n'afọ nke iri na otu nke ọchịchị Hadrian. N'aka nke ọzọ, otu n'ime ihe ọhụụ ọhụụ ya bụ ụbọchị AD 141. N'ime akwụkwọ ndekọ kpakpando ọ nakweere afọ mbụ nke ọchịchị Emperor Antoninus Pius dị ka ụbọchị ntụaka maka nhazi niile. Afọ a bu AD 138
Claudius Ptolemy pụtara ìhè dị ka onye ikpeazụ na-anọchite anya mbara igwe niile nke Greek. Ma ọ bụ na isi ọrụ ya mepụtara na onye na-ekiri ụlọ nsọ Serapis na Canopus. Vatlọ ọrụ a dị nso n’obodo Alegzandria. Isi na kasị ama ọrụ Claudius Ptolemy nke ọ bịara mara nke ọma bụ Mgbakọ na mwepu. A na-eke ọrụ a n'ime mpịakọta 13 nke nkewa ọkwa dị ka nnukwu na nnukwu ọrụ. N'ụzọ dị otú a, ndị edemede ndị ọzọ nwere ike ịkọwa ya site na mkpokọta ihe odide nke mbara igwe. Ihe dị mkpa na ọrụ ya nwere ike bụrụ ihe dị mkpa maka ọganihu nke sayensị.
Mmasị kpaliri ọrụ nile nke Claudius Ptolemy mere ka ọ bụrụ omenala nke iji okwu Grik megisté na-ezo aka na ya. Okwu a putara ihe di uku na nke kachasi. Nke a bụ mmetụta ọrụ Caliph al-Mamun nwere n'asụsụ Arabic zuru ezu sụgharịrị na 827. Aha al-Magisti dị ka ntụgharị asụsụ kwuru si na aha Almagest. Aha a nabatara na West mgbe ochie sitere na nsụgharị Arabic. Nsụgharị a mere na Toledo na 1175.
Njirimara nke ọrụ Claudius Ptolemy
N'iji data niile nke ndị bu ụzọ chịkọta, Claudius Ptolemy wuru usoro ụwa nke na-anọchite anya ya na ọkwa dị elu nke mmegharị niile pụtara ìhè nke ma anyanwụ, ọnwa na mbara ala 5 mara n'oge ahụ. Ọ kachasị jiri data Hipparchus chịkọtara ebe ọ bụ na ha lekwasịrị anya na nke a. O nwere ike iguzobe mmeghari a site na nkenke nkenke site na ihe omumu nke geometric na nghazi di mgbagwoju anya. Ndabere nke ihe omuma a sitere na usoro ihe omuma. N'ime usoro ihe a, ọ bụ ụwa mbara igwe na-enweghị ike ịgagharị na etiti ụwa. Site na nke a, ihe niile dị na mbara igwe, ma anyanwụ, ọnwa na ụwa ndị ọzọ, na-agba ụwa anyị a gburugburu.
Mbara ala ndị a maara n’oge ahụ bụ Mercury, Venus, Jupiter, na Saturn. N'ime usoro ihe a, ụwa nwere ọnọdụ dịtụ ntakịrị site na etiti nke gburugburu gburugburu nke akụkụ ndị ọzọ nke eluigwe. A maara ọnọdụ ndị a dị ka gburugburu dị iche iche. Naanị ahụ nke eluigwe nke gabigara okirikiri ya na-ejikọ otu otu bụ anyanwụ. N'aka nke ọzọ, ọnwa na ụwa ndị ọzọ gbara gburugburu ọzọ. A na-akpọ okirikiri a okirikiri. Etiti nke epicycle rotates na defere na na-enye ya ohere ịkọwara Claudius Ptolemy ịkọwapụta mmejọ niile a pụrụ ịhụ na ngagharị nke ihe ndị dị na mbara igwe.
Usoro Claudius Ptolemy
Usoro a nwere ike ịnye nkọwa nke mmegharị ụwa niile dabara nke ọma na ụkpụrụ nke Aristotelian cosmology nke dị n'oge ahụ. Ọ dịgidere bụrụ naanị ihe nlereanya ruo mgbe Renaissance. N'oge ịlọ ụwa, enwere nkenke ka ukwuu mgbe ị na-ekiri ihe ndị dị na mbara igwe ma enwere ihe omuma karia otutu ihe nyocha ihe di na mbara igwe. Otutu ihe omuma banyere ihe banyere mbara igwe na oge a ka emere na ngwụcha nke oge ochie. Site na ihe omuma a, o di nkpa iwebata otutu okirikiri ohuru nke mere ka ihe nile metutara ihe banyere mbara igwe di mgbagwoju anya.
N'ezie, ụdị heliocentric gosipụtara Copernicus Ọ bụ ọrụ ahụ malitere nhụsịrị nke mbara igwe niile nke Claudius Ptolemy ebe ọ nwere nghọta ka ukwuu nke a tụlere otu n'ime ike ndị ahụ.
Ma buru n'uche na Claudius Ptolemy Ọ bụghị naanị na onye na-enyocha mbara igwe kamakwa ọkà mmụta banyere mbara ala. N'inye ihe omuma ya banyere ala o nwere ike igosi ikike di egwu site na otutu ihe omumu ala. Na ọrụ ya olu 8-akpọ Ala Ejiri usoro nhazi dị iche iche mepụta eserese eserese ngosipụta dị iche iche. Ọ na-anakọtakwa ọtụtụ nchịkọta nke njikwa ala ndị dị mkpa na ndị kwekọrọ na ya na ebe dị iche iche n'ụwa a maara n'oge ahụ.
Iji kọwaa ọrụ a nke ọma, Claudius Ptolemy nakweere atụmatụ Posidonius kwuru banyere gburugburu ụwa. Atụmatụ a dị ala karịa ezigbo ọnụ ahịa ma mee ka ókèala Eurasia dịrị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ. Ọnọdụ a gwara Christopher Columbus ka ọ gaa njem ya, nke bụ nke ga-achọpụta America.
Ọzọ nke ọrụ Claudio Ptolemy Ọ na-ekewa n'ime 5 mpịakọta na a maara aha ya Ngwa anya. Kwuru na ọrụ nke otu na tiori nke enyo na echiche na refraction nke ìhè. Ihe omume ndị a bụ nke anụ ahụ na nsonaazụ ọ kpatara na ha tụlere maka nyocha mbara igwe. A na-ekwetakwa na ọ bụ ya dere akwụkwọ ịgụ kpakpando a na-akpọ Tetrabiblos nke gosipụtara njirimara niile na ederede ndị ọzọ na ọ bara nnukwu uru na mpaghara ọ nwere na Middle Ages.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkọ ndụ na uru nke Claudio Ptolemy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Claudius Ptolemy